मेरोशेयर बाहेक यस्तो छ महिला लघुवित्तको आईपिओ नतिजा हेर्ने तरिका - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार मेरोशेयर बाहेक यस्तो छ महिला लघुवित्तको आईपिओ नतिजा हेर्ने तरिका
मेरोशेयर बाहेक यस्तो छ महिला लघुवित्तको आईपिओ नतिजा हेर्ने तरिका
महिला लघुवित्तले निष्काशन गरेको आईपिओ बाँडफाँड भएको छ । बिक्रि प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले शुक्रबार बिहान ८ बजे शेयर बाँडफाँड गरेको हो । आईपिओको प्रि अलोटमेन्ट मंगलबार गरिएको थियो ।
कम्पनीको आईपिओमा १५ लाख ४० हजार ३५ जनाले आवेदन दिएकोमा ३ हजार ३ सय ५३ जनाको आवेदन रद्द भएको क्यापिटलले जनाएको छ । योग्य कायम रहेका १५ लाख ३६ हजार ६ सय ८२ जनालाई गोलाप्रथामा समावेश गराई शेयर बाँडफाँड गरिएको छ । जस अनुसार १५ लाख ३६ हजार ६ सय ८२ जना योग्य आवेदक मध्ये ३७ हजार ५ सय जनाले समान १० कित्ताको दरले शेयर पाएका छन् ।
यस हिसाबमा आवेदन दिएका मध्ये १५ लाख २ हजार ५ सय ३५ जना आवेदक हात खाली भएका छन् । यसमा आवेदन रद्द भएकाहरुको संख्या पनि जोडिएको छ।
कम्पनीले शेयर निष्काशनको लागि माघ ८ गते धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो । आईपीओ निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड पुग्ने छ । कम्पनीले आइपिओको निष्काशन तथा विक्रीका लागि नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्गलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको थियो । लघुवित्तले आरटिएसमा पनि नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई चयन गरिसकेको छ ।
लगानीकर्ताहरुले महिला लघुवित्तको आईपिओको नतिजा ३ तरिकाबाट मात्र आईपोओको नतिजा हेर्न पाउने छन् । सिडीएससी एण्ड क्लियारिङले आईपिओ निष्काशन गर्ने कम्पनीको वेबसाइट, बिक्रि प्रबन्धकको वेबसाइट र सिडीएससीको मेरो शेयर मार्फत मात्र आईपिओको नतिजा हेर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
सोहि अनुसार बिक्रि प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्टले आईपिओ नतिजाको लागि छुट्टै सबडोमेन तयार पारेको छ । नतिजा प्रकशित भएपछि लगानीकर्ताले https://boid.nsmbl.com.np/ मा गएर आफ्नो डिम्याट नम्बर हालेर आफुलाई शेयर परेको नपरेको हेर्न सक्ने छन् । यहाँ क्लिक गरेर पनि सोहि वेबमा पुग्न सकिन्छ । यस बाहेक नतिजा प्रकाशन भएपछि मेरो शेयरबाट पनि आईपिओको नतिजा हेर्न सकिने छ । महिला लघुवित्तले भने आईपिओको नतिजा हेर्न छुट्टै ब्यबस्था गरेको छैन । महिला लघुवित्तको वेबसाइटमा राखिएको लिंक पनि नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट कै हो ।
Previous articleअब आइपीओ रिजल्ट अनलाइन मिडियाबाट हेर्न नपाइने,’मेरो शेयर’ एप र आधिकारिक वेबसाइटबाट मात्र हेर्न मिल्ने
Next articleस्वस्तिमाले साइन गरिन् साउथ चलचित्र ‘थिरिमाली’
यिनै हुन् हिजो बिहान मृत्यु भएका २२ वर्षका वासु बस्नेत